Fanabeazana 60 taona nanabeazana ny Cemeam
Tontolon’ny fampianarana Mety ajanona ny fampiharana ny PSE
Mbola baraingo tanteraka ny firosoana mankany amin’ny fanatanterahana ilay rafi-panabeazana PSE eto amintsika.
Fikambanan’ny mpianatra Normaliens Mitaky ny fijerena akaiky ny sehatra fanabeazana
Nanao fanambarana ny fikambanan’ny mpianatra normaliens SONOSE/MADA nandritra ny fihaonamben’izy ireo tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo tetsy amin’ny ANS Ampefiloha.
Sekolim-panjakana Ato ho ato vao hiatrika fanadinana voalohany
Ny 01 martsa ho avy izao vao hifarana ny fe-potoana faharoa hianaran’ny mpianatra amin’ity taona 2019 raha ny 07 janoary lasa teo no nanomboka.
Manampahaizana navoakan’ny IT University Maro no efa nahita asa sahady
Nitombo 98 mianadahy indray ireo tanora manampahaizana momba ny fikirakirana ny informatika avo lenta eto amintsika. Mpianatra navoakan’ny sekoly ambony IT University eny Andoharanofotsy izy ireo, ka ny 31 isa misalotra ny anarana Lafatra no notolorana ny mari-pahaizana “Master II” izany hoe
Nofaranana tamin’ny sabotsy 27 janoary lasa teo ny fankalazana ny faha-60 taonan'ny Centre d' Entrainement aux Méthodes d' Education Active à Madagascar (CEMEAM) rehefa nosokafana ny 10 jona 2017 tamin'ny taona lasa.
Niara-nikorana, niara-nifaly sy nandihy ireo mpikambana sy ireo olona nasaina. Tonga maro be ireo mpikambana ary nifankahita indray ireo mpiofana tamin'ny taona 60-70 sy ireo taty aoriana rehetra. Marihina fa tamin'ny taona 1957 no nanomboka nandray ny asany ny CEMEAM teto Madagasikara. Raha ny fahafantaran'ny maro azy dia mpitondra colonie de vacances izy ireo ary mbola manohy izany hatramin'izao. Manofana ireo rehetra hitondra mpianatra ihany koa toy ny tale, ny ekònome ary ny mpanentana. Efa maro ireo nandalo tao amin'ny fikambanana satria izay nandray ny fanabeazana tamin'ny Cemeam mantsy dia tonga dia mpikambana avokoa araka ny fitsipika. Efa nisy tamin'ireo mpitondra teto Madagasikara no mpikambana tao o raha tsy hilaza afa tsy ny filoha teo aloha Philibert Tsiranana. Maro ireo mpikambana nandalo niofana tamin'ity fikambanana ity, anisany ireo conseillers pedagogiques, ireo élèves professeurs niofana ho mpampianatra. Efa maro be ireo nandray ny fanabeazana Cemeam nandritra izay taona maro izay. Mitohy ny asany fa tsy hijanona eo ary inoana fa hitondra vokatra tsara eo amin'ireo mpandray ny fiofanana, indrindra amin'ny fampandrosoana ny Firenena.